'Kalabar Muslimiinta Maraykanka waxa ay la kulmaan faquuq' - BBC News Somali
Muslimiinta Pittsburgh, Pennsylvania oo u dabaal dagaya Ciidul Fitriga
Ku dhawaad kala bar dadka Muslimiinta Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in sanadkii ugu danbeeyay ay la kulmeen faquuq.
Daraasad ay samaysay xarunta cilmi baarida Pew Research Center ayaa lagu ogaaday in dad badan oo muslimiinta Maraykanka ah ay la kulmaan faquuq.
Sadax meelood hal meel dadkani waxa ay sheegeen in ay la kulmaan faquuq badan ,halka,boqolkiiba 74 ay sheegeen in madaxwayne Trump "uusan saaxib la ahayn Muslimiinta ".
Sanaddii 2011, boqolkiiba 64 waxa ay muslimiinta Maraykanka sheegeen in madaxwayne Barack Obama "uu saaxib yahay Muslimiinta ".
Cilmibaarida ayaa waxa sidoo kale muujinaysa in muslimiinta Maraykanka ay noqdeen kuwa bulsha ahaan dhaxdhaxaad ah.
Trump oo diiday inuu Muslimiinta la casheeyo habeenkii Ciidda
Cilmibaarayaasha daraasadani sameeyay ayaa waxa ay la hadleen oo ay su'aalo waydiiyeen iyaga isticmaalaya qadka taleefoonka 1,001 Muslimiinta Maraykanka.
Waxa ay sheegeen in dadka ay u soo xusheen in su'aalaha ay waydiiyaan ay ahaayeen dad hormuud u ah buslahada.
Inkastoo ay jiraan dad badan oo faquuq u gaystay Muslimiinta ayaa waxa hadana jira dad taageera muslimiinta ku nool Maraykanka.
Kalabar dadka la hadlay cilmibaarayasha ayaa waxa ay sheegeen in ay sii adkaanayso in qof muslim ah uu Maraykanka ku noolaado,halka boqolkiiba 48 ay sheegeen in si shaqsi ahaan ah ay ula kulmeen faquuq sanaddii aanu soo dhaafnay.
Sida ku cad daraasadda ay soo saartay xarunta cilmi baaridda Pew Research Center faquuqa ugu badan ee ay muslimiinta la kulmaan ayaa ah in laga shakiyo taasi oo ah boqolkiiba 32 ka mid ah dadkii cilmi baarayaasah ay la hadleen.
Daraasada ayaa sidoo kale muujinaysa in laammaha ammaanka garoomada ay si gaar ah ula dhaqmaan Muslimiinta taasi oo dhan boqolkiiba 19, iyada oo loogu yeero magacyo daandaansi ah.
Boqolkiiba 6 ka mid ah dadka su'aalaha la waydiiyay ayaa waxa ay sheegeen in weeraro loogu hanjabay.
Mid ka mid ah dadkii su'aalaha la waydiiyay ayaa yiri "waa in aan taxadar dheeraad ah yeelanaa aana iska eegnaa waxa agagaarkeena ka socda,aan ogaano halka aan ku suganahay iyo cidda joogta iyo fikirka ay muslimiinta ka aaminsan yihiin."
Daraasada ayaa sidoo kale sheegtay in dadka xiran labiska muslimiinta sida xijaabka ay sheegeen in ay la kumaan midibtakoor dalka Maraykanka.
Dhammaan noocyadani faquuqa lagu hayo muslimiinta Maraykanka ayaa sare u kacay tan iyo 2007, markii uu madaxwaynaha ahaa George W Bush, balse waxa ay arrintani hoos u dhacday 2011,markii uu xilka qabtay madaxwayne Obama.
TOOS Khadka tareenka isku xira Itoobiya iyo Jabuuti oo la xiray